Xulidan Golaha Qolka Musqusha, Marnaba haka qoomamayn inaad iibsato!
Bogga ugu weyn / blog / Xulidan Golaha Qolka Musqusha, Marnaba haka qoomamayn inaad iibsato!
2020 / 10 / 14 Qoondayntablog 1923 0
Markay tahay qolalka musqusha, kulligeen waan ku naqaannay sida musqusha caadiga ah, innagoo saran mas'uuliyadda culus ee keydinta musqusha. Dabcan, haddii aad soo qaadatid erey wanaagsan, qiimaha musqusha sidoo kale waa ku tiirsan tahay si kor loogu qaado gacanta.
Sidaa darteed xulashada golaha musqusha ma noqon karo mid caajis ah, ugu horreyntii, in awoodda, oo ay ku xigto sidoo kale ku habboon dhammaan qaabka qurxinta musqusha, iwm., Xulo qodobbada tixraaca, way fududahay in la wareeriyo dadka.
Sidee Loo Xulaa Golaha Wasiiradda Musqusha?
1.Xulo Sida ku xusan Dabaysha Musqusha
Qolka musqusha waa joogitaanka ugu soo jiidashada badan ee musqusha, waxaa la dhihi karaa waa alaab guriga muhiim u ah in la muujiyo milicsiga iyo dhadhanka milkiilaha. Markaa waxa ugu horreeya ee laga fiirsado marka aad iibsaneyso qolka musqusha waa qaabka golaha musqusha, waa inuu ahaadaa mid la jaan qaadaya qaabka qurxintooda gurigooda.
Qaabka cusub ee Shiinaha
Qaabka cusub ee Shiinuhu maaha nuqul fudud oo qaabka Shiinaha ah, laakiin waa isku-dar ah walxo dhaqameed laga soo saaray qaabka Shiinaha iyo walxaha casriga ah.
Qaabkan qolka musqusha guud ahaan waa alwaax adag oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan, naqshadeynta ma isticmaali doonto qaab isku dhafan oo adag, laakiin si loo doorto khadadka joomatari ee fudud. Isticmaalka guud ee qaabkan qolka musqusha ayaa umuuqan doona sayidkiisa xarrago badan.
Qaabka casriga ee yar yar
Qolalka musqusha ee qaabdhismeedka casriga ah ee casriga ah ayaa fiiro gaar ah u leh ficil ahaanta iyo bilicsanaanta. Sidaa darteed, qaabkan armaajooyinka musqusha guud ahaan waxay u isticmaali doonaan midabada iftiinka muuqaalka midabka, halka howlahooda keydinta ay aad u awood badan yihiin, waxaa la dhihi karaa waa xulashada koowaad ee qoysaska yaryar.
Qaabkan ka mid ah golaha wasiirada musqusha ayaa hadda caan ku ah dhalinyarada ay jecel yihiin, sababtoo ah fudeydkiisa iyo deeqsinimadiisa laakiin ha lumin dareenka naqshadeynta, laakiin sidoo kale inta badan qaabka guriga ayaa isku aad u fiican.
Qaabka badda Mediterranean-ka ayaa muran la’aan ah kan ugu gaar ah dhammaan qaababka qurxinta. Maaddaama qaab-dhismeedka Mediterranean uu ka yimid xeebta Spain ee xeebta iyo xeebta cad, waxaa caddaan iyo buluug midabbada ugu waaweyn leh. Oo labadan midabba waxay abuuri karaan dareen deggan, oo bilaash ah.
2.Xullo Marka loo eego Naqshad Dhismeedka
Daldalaada Musqusha Golaha Wasiirada
Qolalka musqusha ee la laalay ayaa la door bidaa inta badan guryaha. Sababtoo ah naqshadeynta isbeddelka hoose, oo kala soocaya golaha wasiirada iyo dabaqa, waxay si wax ku ool ah u faafisaa qoyaanka iyo qoyaanka, ka hortagga suurtagalnimada in qoyaanku ku soo duulo golaha.
Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay faa iidada kordhinta dareenka booska. Markaa xitaa haddii uu yahay qoys yar, oo lagu rakibay qolkan musqusha oo leh isla taxane muraayad muraayad ah, ma dareemi doono ciriiri.
Gogosha Musqusha Musqusha
Marka loo barbardhigo qolalka musqusha ee la sudho, qolka musqusha ee noocan ah shuruud kuma xirna darbiyada markii la rakibo.
Si kastaba ha noqotee, maaddaama musqusha ay asal ahaan qoyan tahay muddo dheer. Gaar ahaan haddii gurigu uusan ahayn mid qallalan oo go'doon qoyan ah, armaajooyinka musqusha min dabaq ilaa saqafka ah ayaa inta badan la soo xiriiri doona biyo, taas oo keeneysa dhaawac soo gaara golaha wasiirrada, taasoo saameyn ku yeelata nolosha adeegga.
Sidaa darteed, markaad iibsaneyso armaajooyinka musqusha dabaqa, hubi inaad dooratid lakab laba-geesle ah oo aan biyuhu ka hortagi karin oo ka mid ah kabadhada musqusha, sida kaliya ee lagu hubiyo in qaabdhismeedka gudaha ee kabadhka musqusha ee dabaqa ah uusan qalloocin, si loo kordhiyo nolosha adeegga.
3.Sida ku xusan Xulista Qalabka Golaha
Marka la barbardhigo qalabka kale ee qolka musqusha, armaajooyinka musqusha adag ayaa runtii ah kuwa ugu habboon deegaanka una caafimaad qaba, maaddaama qalabka alwaaxda sida caadiga ah toos looga sameeyo alwaax kala duwan sida alaabta ceeriin.
Si kastaba ha noqotee, gaar ahaanta deegaanka musqusha, qoryaha caagga ah ayaa guud ahaan loo isticmaalaa in lagu sameeyo armaajooyinka musqusha. Alwaaxdan waa la nadiifiyey oo waa fuuqbaxay, iyo sidoo kale geedi socodka kale ee ka hortagga biyaha si ay si wax ku ool ah uga hortagto biyuhu iyo qoyaan-caddeyn.
Qolka musqusha ee walxahaan laga sameeyay wuxuu si fudud u abuuri karaa meel musqusha oo leh dareemo casri ah oo ay fududahay in la nadiifiyo. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ka taxaddartaa walxaha fiiqan si aad uga fogaato waxyeelada garaacista inta lagu jiro isticmaalka maalinlaha ah.
Maadadani waa mid sifiican uga hortageysa isdaba-marinta anti-xoqidda, waxaa la dhihi karaa waa dayactirka ugu wanaagsan ee alaabada musqusha.
Si kastaba ha noqotee, walxaha PVC sidoo kale wuxuu leeyahay cillad: haddii aad dusha ka saarto walxo culus muddo dheer way fududahay in la beddelo, markaa cabirka guud ee arimahan qolka musqusha wax yar baa ka sii yaraanaya, oo ku habboon saddex qoys inay isticmaalaan.
Sidee loo ilaaliyaa golaha wasiirada ee musqusha?
1. Nadiifinta Golaha Wasiirada Musqusha
1, qolka musqusha ee biyaha qaata, sida caadiga ah maro yar oo qoyan ayaa si tartiib ah loo tirtiri karaa si looga fogaado daxalka ay sababaan biyaha.
2, saabuunta ugu fiican ee loo isticmaalo isticmaalka dhexdhexaadka ah, isticmaalka cadayga ee cadayga musqusha sidoo kale waa alaab sun wanaagsan.
3, qolka qubeyska waxaa badanaa lagu dhejin doonaa qaar ka mid ah saabuunta, nadiifiyeyaasha iyo alaabada kale ee wax lagu nadiifiyo, qulqulka taxaddar la'aanta ah ee saabuunta lagu nadiifiyo ayaa ugu wanaagsan in isla markiiba la nadiifiyo (ama alaabada nadiifinta ee ka hooseysa lakabka dharka).
2 Dayactirka Golaha Wasiirada Musqusha
Lacquer scuffs, oo aan taabanaynin rinjiga qoryaha hoostiisa, oo lagu heli karo midabka golaha wasakhda isku midab ama midab midab ah, golaha wasakhda ee loo yaqaan 'trauma smear' si loogu daboolo midabka salka u ah, ka dibna ciddiyaha hufan ee lakabka khafiifka ah loo daboolay ayaa noqon kara.
3 Qolka Musqusha Talooyin Isticmaal Maalinle ah
1, qolka musqusha ee maaraynta, waa in si fudud loo qaadaa oo si fudud loo dhigaa, ha u jiidin si adag; sida muraayada golaha wasiirada iyo xiriirka dhulka, waa in lagu dhajiyaa waxyaabo jilicsan, si aan loo nabar gaarin; dhulku ma fidsana, waa inuu noqdaa cagaha adag.
2, rakibaadda biyaha tuubada oo aad tubbada biyaha si aad isugu xirto cufan, una baahan tahay inaad si joogto ah u hubiso si looga fogaado inay daadadaan wax yeelaan golaha wasiirada.
3, ma isticmaali doono walxaha adag ee fiiqan si loo xoqo dusha sare ee golaha wasiirada, si uusan u keenin waxyeelo dusha sare ah oo ay sababto biyo mareenka.
4, in laga hortago iftiinka tooska ah, si looga hortago in golaha wasiiradu waxyeello soo gaarto. Qolka hawo ka dhig.
Noocyo kala duwan, qaabab kala duwan oo ka mid ah armaajooyinka musqusha ayaa had iyo jeer kuu keeni kara khibrad ka duwan. Waxyaabaha kor ku xusan waxay ku saabsan yihiin xulashada iyo dayactirka armaajooyinka musqusha, waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto.
Hore:: Xulidan Golaha Qolka Musqusha, Marnaba haka qoomamayn inaad iibsato! Next: Kohler Ayaa Maxkamad Si Weyn Loogu Yaqaano U Soo Bandhigay Shirkada Musqusha Ee Maxkamad In Ka Badan $ 1.4 Milyan Oo Khasaare Ah